Cabdiweli Gaas oo markii ugu horeesay ka hadlay Eedeyntii loo jeediyay Dowlada iyo Shabaabka soo galay Deegaanadooda – STAR FM SOMALIA
Cabdiweli Gaas oo markii ugu horeesay ka hadlay Eedeyntii loo jeediyay Dowlada iyo Shabaabka soo galay Deegaanadooda
Madaxweynaha Maamulka Puntiland Mudane Cabdi weli Maxamed Cali Gaas, oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa markii ugu horeesay ka hadlay Shabaabka kusoo jabay deegaanada Puntiland gaar ahaan dhinaca Xeebaha.
Waxa uu sheegay Madaxweynaha Puntiland in ay diyaar u yihiin in ay iska difaacaan dagaalyahanada Al-Shabaab ee duulaanka kusoo qaaday, waxa uuna tilmaamay horey dagaal ula jireen Al-Shabaab hadana sii xoojinayaan dagaalka ay la galayaan kuwan cusub.
Madxaweynaha Puntiland ayaa meesha ka saaray in maamulkiisa ay dalbanayaan Ciidamo AMISOM iyo ciidamo kale oo gacan ka siiya dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, waxa uu sheegay in ay u baahan yihiin kaliya taakulo si ay ula dagaalamaan Al-Shabaab.
” Waxaan kuu sheegayaa Puntland waa isaga filan tahay in ay iska difaacdo Al-Shabaabka horay ayey noola joogeen, keliya waxaa dheer kuwa hadda dhanka koonfureed nooga yimid, AMISOM iyo cid kale Puntland uma baahna, waxa aan u baahanahay waa in nala siiyo taakulada ciidanka Soomaaliya la siiyo qaybta aan ku leenahay ” Ayuu yiri Gaas.
Dhinaca kale Madaxweynaha Puntiland ayaa ka hadlay eedeyn uu Dowlada Federaalka Soomaaliya uu ujeediyay Wasiirka Amniga Puntiland uu ku eedeeyay Dowlada Fedeeaalka in ay ku lug leedahay Duulaanka Al-Shabaab ku qaadeyn Deegaanada Puntiland.
”Anaga iyo Dowlada Federaalka Soomaaliya waxaan nahay isku cadaw ,eedeynta Dowlada Federaalkana loo jeediyay waa mid qaldan oon sax aheyn, hadalka kasoo yeeray Wasiirka waxa uu ahaa mid sarbeeb ah, sida cad lana wada ogyahay Al-Shabaab waa cadowoga Umada Soomaalieed ”Ayuu yiri Gaas.
Hadalka Madaxweynaha Puntiland ayaa imaanaya Xili dagaalyahano katirsan Al-Shabaab ay gaareen xeebaha Bari ee Badweynta Hindiya, waxaana shalay deegaano katirsan Puntiland ka qarxay dagaal u dhaxeeyay Ciidamada Puntiland iyo Al-Shabaab.
Dagaal u dhaxeeya Ciidamada Puntland iyo Al-Shabaab oo saaka mar kale ka qarxay deegaanka Suuj